ကမန်မိသားစု ၅၅ စုကို ရခိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ပြုခြင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရြှိ - Yangon Media Group
ကမန်မိသားစု ၅၅ စုကို ရခိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ပြုခြင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရြှိ
ကမန်မိသားစု ၅၅ စုကို ရခိုင်မှရန်ကုန်သို့ရွှေ့ပြောင်း ခွင့်ပြုခြင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖြင့် လွဲမှားစွာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကာ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်နေပြီး ပြည်သူကိုမျက်လှည့် ပြသည့်လုပ်ရပ်ဟုရှုမြင်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်သုံးသပ် ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင် မြင့်က အဆိုတင်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး လွှတ်တော်က ဆွေးနွေးရန်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့သည်။
မတ် ၅ ရက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဦးမောင်မြင့်က ဇူလိုင် ၂ ရက်ထုတ် သတင်းစာတွင် ဖော် ပြခဲ့သော နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေ ထုတ် ပြန်ချက်ပါအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့် ပြုခဲ့သည်ဆိုသည့် ကျောက်ဖြူ ပေါက်တောနှင့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်များရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းသုံးခုမှ အိမ် ထောင်စု ၅၅ စုကို ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”အကြံပြုချက်မှာပါတဲ့ မူလ နေရာကို ပြန်ပို့ရမယ့်အစား ရန်ကုန်ကိုပို့တာဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လွဲမှားဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဆိုတာဟာ ကော်မရှင်ကို ခုတုံးလုပ် ပြည်သူကို မျက်လှည့်ပြတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ရှုမြင်ပါတယ်”ဟု ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်၏အကြံပြုချက်နံပါတ် (၈) တွင် ရမ်းဗြဲရှိ ကမန်မိသားစု ၅၅ စုကို မူလနေ ထိုင်ရာသို့ ပြန်ပို့ရမည်ဟုအတိအ လင်းပါကြောင်း ရန်ကုန်ပို့ရမည် ဟု လုံးဝမပါကြောင်း ဦးမောင်မြင့်ကဆိုသည်။ ”အကြံပြုချက်မှာပါတဲ့မူလ နေရာကိုပြန်ပို့ရမယ့်အစားရန်ကုန် ကိုပို့တာဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လွဲ မှားလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဆိုတာက ကော်မရှင်ကိုခု တုံးလုပ်ပြည်သူကိုမျက်လှည့်ပြတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ရှုမြင်ပါတယ်”ဟု ဦးမောင် မြင့်ကပြောသည်။ ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ကိုအ ကြံပေးရုံသာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟုပြော သော်လည်း အကြံပြုချက်တွင်မပါသည်ကိုပင် အမိန့်တစ်ရပ်ပမာသ ဘောထားပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက် နေခြင်းသည် ပြည်သူများ၏ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ သုံးသပ်ဖို့လို နေကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
”ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ရခိုင်မှာပဲရှင်းလို့ရပါတယ်။ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ နေရာတွေအများကြီး ရှိလျက်နဲ့ ရန်ကုန်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ စီမံစိုင်းပြင်းတာကို ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ကတော့ လိုက်လို့မမီနိုင် ပါဘူး။ ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်ကို ရခိုင်မှာပဲကုတာကောင်းပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ရန်ကုန်ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ပြည် လုံးပြန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ထပ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် IDP စခန်းတွေမှာဘင်္ဂါလီ ၁၂ဝဝဝဝ ဟာတန်းစီပြီး အသင့်စောင့်ဆိုင်း နေပါတယ်။ အခုလို တရားဝင် ကော တရားမဝင် ဝင်နေတာကိုပါ လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး မကြာမီမှာ သူတို့တွေချည်းဖြစ်သွားမှာ မလွဲဧကန်ပါ”ဟု ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။ ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်အကြံ ပြုချက်တွင် မပါဝင်မှုကိုလုပ်စရာ မရှိကြောင်း၊ တစ်ခုလုပ်ပါက တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ်အညှစ်ခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်မှုကို ပြန်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်အကြံ ပြုချက်တွင် အဓိကအားဖြင့် (၁၂)ချက်ရှိကြောင်း၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားသည့် အကူအညီပေးနိုင်မှု၊ သတင်းယူခွင့်၊ တရားမျှတမှု နှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ နယ်စပ် ရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုံခြုံရေးတပ် ဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းများပေး ခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် IDP စခန်းများအား ပိတ်သိမ်းရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအ ကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၊ နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်ကိုယ်စားလှယ်ထားရှိနိုင်မှုနှင့် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟု ၎င်းကဆိုသည်။
”ကျွန်တော်တို့ လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေက ပါဝါပွိုင့်မှာတင် ပြခဲ့တဲ့အချက် ၁၂ ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသာဟိုလူပြောကောင်း နိုးနိုး၊ ဒီလူပြောကောင်းနိုးနိုးနဲ့ လိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံလည်း ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ နိုင်ငံလိုဖြစ်သွားမှာ မလွဲဧကန်ပါ ပဲ”ဟု ဦးမောင်မြင့်ကပြောသည်။ အဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်သင်းကထောက်ခံခဲ့ပြီး မူလဒေသသို့သာ ပြန်လည်နေရာချထားရမည့်အစား ရန်ကုန်မြို့သို့ခွင့်ပြုခဲ့ ခြင်းဟာအစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည့်အတွက် အစ္စလာမ်မိုက်ဇေးရှင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆချက်များ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပေါ်ပေါက်နေခြင်းက ပြည်သူများ သံသယပွားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သဖြင့်အဆိုကို ထောက်ခံကြောင်း ပြောသည်။ ကမန်လူမျိုးများသည်ရခိုင်တိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်စုဝင်များဖြစ် ပြီး ၁၉၈၃ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရခိုင်၊ ကမန်၊ ခမွီး၊ ဒိုင်းနက်၊ မရာမာကြီး၊ မြို၊ သက်တို့သည် ရခိုင်အစုတွင်ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၇၃ သန်းကျော် ပမာဏအထိ ခွင့်ပြုေ??
လမ်းနယ်နိမိတ် လျှော့ချမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြေလပ်များကို သိမ်းယူစဉ် လျော်ကြေး မပေးခဲ့ပါ
‘ငါမုန်းတဲ့ အက္ခရာ’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ရိုက်ကူးမည်
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး မန္တလေးမြို့မှ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမများ စုပေါ??
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါး သတ်ဖြတ်ခံရ
သားသမီးယူရန် လိုရမည်ရ ပြင်ဆင်ထားသော ဆာရာပေါလ်ဆင်